टिकटकमा रमाइलो भिडियो राख्ने शर्मिलाको रूहाउने कथा:श्रीमानले पनि बीच बाटोमै छाडे,रातको १२ बजे छोरा छाडेर मर्न गएपछि – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/टिकटकमा रमाइलो भिडियो राख्ने शर्मिलाको रूहाउने कथा:श्रीमानले पनि बीच बाटोमै छाडे,रातको १२ बजे छोरा छाडेर मर्न गएपछि
गरिबीको रेखामा रहेकी शर्मिलाले त्यो समय न छोराको राम्रो संग उपचार गर्न पाईन न आफुलाई सुत्केरी महसुस गरिन।श्रीमान विदेश भएकै कारण उनि त्यो समय आफुलाई निकै पिडामा व्यतित गरिन।पछि श्रीमान आए जव छोराको उपचार न हुने भए पछि,फेरी दुइ सन्तान भए एकै पटक।जुम्लिया छोरा जन्मिए पछि थपिएको खुसि फेरी धेरै समय टिक्न पाएन,कारण श्रीमान बाट उनले साथ् पाइनन् साहेद सानै उमेरको बिबाह थियो,बिचैमा श्रीमानले छाडिदिए पछि उनि एक्लै बस्न थालिन आज उनि गरिबीबाट थोरै पछाडी हटेकी छिन र आफुले केहि गरेर परिवार पालन पोसन गर्न सक्ने भएकी छिन।हेरौ यो मन छुने कुराकानी कमल सरगमको साथमा :जिज्ञासा भए कमल सरगमलाई सम्पर्क गर्नुहोला 9851224970मा
आज २०७७ साउन ३१ गते शनिबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
साबधान ! फ्रोजन मासुमा तीन हप्तासम्म बाँच्न सक्छ कोरोना
एकैदिन २० प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि प्रहरी कार्यालय सिल